Amanqaku Ufakelo for steel stainless multistage pump centrifugal - China Shanghai SOG neeMpompo
Le Notes yokufaka Stainless Multistage Centrifugal Pump:
1. Ukususela insimbi multistage centrifugal technology ufakelo pump, umbhobho ofunxayo kufuna imeko engqongqo itywina, akakwazi ukuba kombhobho ukuvuza okanye ukuvuza, kungenjalo uya kutshabalalisa isidanga ongenawo kwi ugwebu amanzi kwimpompo, ukuba imveliso amanzi pump yi zancitshiswa, okanye uya sisikhulu kakhulu ukuba kukha amanzi. Ngoko ke, simele ngenyameko ukwenza umsebenzi omhle lojongano ye yombhobho ukuqinisekisa umgangatho zokwakha uqhagamshelwano ezisendleleni.
2. Kufuneka wabonisa ukuba xa intloko kunye lobushushu yamanzi le insimbi kwimpompo multistage centrifugal kunye nombhobho ufakelo pump centrifugal ezahlukileyo iimeko zovavanyo, ukuba ekuphakameni wobulali kweemitha ngaphezulu kwe 300 okanye ubushushu amanzi sokumpompa lidlula 20 degrees Celsius, ixabiso ebalwa baya alungiswe. Oko kukuthi, uxinzelelo umoya ezisezintabeni ezahlukeneyo kwaye ifumile uxinzelelo umphunga ngaphezu lobushushu amanzi ka-20 degrees Celsius.However, xa ubushushu amanzi ungaphantsi degrees 20 Celsius, uxinzelelo yomphunga ifumile kunokuba ziyakungahoywa.
3. Ukuze uqinisekise ukuphakama ufakelo pump (okt sokufunxa). Le ukuphakama ibhekisa lekhefu nkqo phakathi kwamanzi kunye neziko-umgca le impeller pump. Kufuneka mazingabhidaniswa ukuphakama sokufunxa avumelekile. Ukuphakama ezincamathelayo kuvunyelwa phezu impompo yamanzi incwadi imveliso elucidation okanye abagcine ibonisa ixabiso ongenawo kwi icandelo owongozelelweyo le impompo yamanzi. Oko kulinganiswa ukuyeka ukucikideka phantsi koxinzelelo eziqhelekileyo umoya yaye iqondo lobushushu yamanzi degrees 20 Celsius. Akunamsebenzi ucinge ukuhamba kwamanzi emva kokuba umbhobho ofunxayo into ifaniswe. Ukuphakama unit lwempompo kufuneka ibe ixabiso lendawo eseleyo emva ngokuvumela ukuphakama ezincamathelayo ukuba zibanjwe emva yokuphulukana kumgca sokufunxa zeNkcazo umbhobho ofunxayo. Ukuphakama unit pump ayikwazi ngaphezulu ixabiso ubalwe. Kungenjalo, impompo yamanzi akayi ukumpompa up.
4. Igalelo ixabiso ubalelwa intloko ngenxa -loss ukuya kumbhobho kweelana umbhobho ofunxayo. Ngoko ke, uyacebiswa ukuba amkele ilungiselelo imfutshane igiza kwaye ufake izifakelelo engqinibeni kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona enokuthelekelelwa ukuba amalungiselelo ngokufanelekileyo imibhobho nabanye calibers ukunciphisa izinga lokuhamba kwi imibhobho.